Oké mkpa Atụmatụ maka nọchiri Dị ka ihe Internet Freelancer
Site: Bhose September 10, 2013
Banyere 75% nke ndị mmadụ na-arụ ọrụ na-eme ka ego online ọrụ dị ka onwe freelancers, na ha ma telecommute si n'ụlọ site ma ọ bụ nweta ụgwọ ọrụ site na ụfọdụ online ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ha onwe ha okwu na ikike. The internet mere ka ọ dị nnọọ ekwe omume n'ihi na ibu ọrụ na-outsourced ka ọnụ ala ọrụ ná mba ndị ọzọ na n'ihi na ha ga-akwụ ụgwọ site online ugwo nhazi nhọrọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na United States na-igbutu na overheads site outsourcing ọtụtụ n'ime ha ọrụ na-pesonel ke India na mba ndị ọzọ, ma na-akwụ ụgwọ ha site PayPal ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ internet ugwo usoro. Ọtụtụ ndị inyom na US na-ngwa ngwa ịghọ ọrụ-na-ụlọ mums na ọtụtụ online ulo oru na-abịa na-ezubere iche na-arụ ọrụ-na-ụlọ mums na ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ na freelancers. Ị bụ ya mere a freelancer ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ukwuu ma ọ bụ dị ka obere ka ị chọrọ na kpọmkwem site n'ụlọ gị gị na site na gị internet ejikọrọ na kọmputa, na-ina ugwo site online ugwo processor ụzọ. Olee mgbe ahụ ụfọdụ oké mkpa ihe na-eme ka ịga nke ọma gị dị ka a na-arụ ọrụ na-obibi freelancer?
m. Nịm gị onwe gị na-arụpụta awa: Ị ga-aghọta na mgbe ị na-arụ ọrụ site ntụsara nke ebe obibi gị, ọ pụrụ ịbụ ihe ezi uche ka na-arụpụta awa mgbe ị na-agaghị nsogbu n'obi ọbịa ma ọ bụ na-ebu pụọ site frivolities na TV. Ị ga-ịtọ ụfọdụ na-arụpụta awa iche na nke ị na-aghaghị iche ihu ọrụ gị dị ka ma ọ bụrụ na ị nọ a nkịtị ụlọ ọrụ, na ị nwere ike ịgwa gị ọbịa bụghị ileta ndị a na awa n'ihi na ị nwetara irite gị nọgide na-.
ii. Ọrụ a eme gburugburu ebe obibi: Dị ka a na-arụ ọrụ na-obibi freelancer, ọrụ gị nwere ike ịbụ isiokwu ide, VA, oku center, transcriptionist na online nduzi ndị ọzọ. Ị mkpa a eme ebe gị na ụmụ gị ga-a mmekpahu na ebe ị pụrụ itinye uche na ọrụ gị enweghị ihe ọ bụla dị n'akụkụ peeji maka njehie. Kere telecommuting dị ka mebere nnyemaaka ma ọ bụ oku center na ndị ahịa ndị ọzọ na njedebe nke akara anụ ụmụ gị mkpu arịrị na TV blaring, ma ọ bụ ọbụna a mkpọtụ nke motorcars. Cheta na ọtụtụ ọrụ-na-ụlọ freelancers irite nza karịa ụgwọ ọnwa earners.
III. Unu aru karịrị gị na-ata: Ọ bụ ike bufee onwe gị na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-elekọta banyere mpịakọta nke ọrụ ndị ị na-na-na. I nwere ike na-anyịgbu gị na ọrụ gị mma nwere ike ịta ahụhụ n'ihi ya mgbe nchegbu na-amalite na-a ịkpatara gị. Kere nwere mperi ndenye ihe wetara na asụsụ na njehie na weebụ gị ọdịnaya ide ọrụ nanị n'ihi na ụbụrụ gị na-mechisịrị ọnụ ala si n'elu na-arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na online ọrụ ike na-abịa lulls na elu-achọ, ị ga-anakwere ọrụ ị bụ nanị n'aka nke na-emecha na-enweghị ka ha àgwà na-ata ahụhụ, na i nwere ike n'ezie tụlee outsourcing mgbe ị na-imikpu na ukwuu ọrụ na na-ezute deadlines.
too ogologo. Nọgidenụ na-ezi bookkeeping ndekọ: Ọ bụrụ na ị bi n'ime United States, echefula na ị ga-akwụ ụtụ isi na IRS ma ọ bụrụ na ị na-akpata ihe karịrị $600 dị ka a freelancer na ọ bụla e nyere afọ, na i nwere ike dịkwa mkpa ka dechapụ ụfọdụ obere overheads ezie na ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ. Idebe ezi ndekọ nke gị ego, isi mmalite nke online ọrụ, ọrụ deadlines, na ndị ọzọ dị mkpa na taabụ mkpa ka ọrụ gị ga-atụkwasị gị a ọnọdụ ebe ị pụrụ ikpebi gị ego ọnọdụ si dị nnọọ a ilekiri si akwụkwọ.
v. Otutu isi mmalite nke online ego: Mgbe ị na-arụ ọrụ dị ka a freelancer online, na ị na-mgbe ọ bụghị ruo eru maka nchebe uru accruable ka a nkịtị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ị na-adịghị ruru eru maka ọgwụ mkpuchi, 401k uru, na ndị ọzọ na-arụ ọrụ kwesịkwara iburu n'uche na ndị ọzọ; ị ga-ya mere hụ na ị na-enweta multiple isi mmalite nke online ego mere na ọ bụrụ na onye ọ bụla inweta ma ọ bụ isi iyi na mberede takọọ, ị pụrụ inweta na ndị ọzọ na-enweghị na-ata ahụhụ ọ bụla na-egbu mgbe ka na-azọpụta n'ihi na echi.
-Akpa na-ekwu okwu on "Oké mkpa Atụmatụ maka nọchiri Dị ka ihe Internet Freelancer"